Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (4) အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက် - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Beginner to Elementary Level / Elementary to Pre-intermediate Level / Intermediate Level သင်ခန်းစာများ / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (4) အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (4) အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
Zin Zae 11:53 PM Beginner to Elementary Level , Elementary to Pre-intermediate Level , Intermediate Level သင်ခန်းစာများ , Level အဆင့်ဆင့် English Quiz Edit
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (4)
* အချို့တွေ ဖတ်မရမှာ စိုးလို့ Unicode နဲ့ အောက်မှာ ထပ် ရေးပေးထားပါတယ် ။ *
* အခြို့တှေ ဖတျမရမှာ စိုးလို့ Unicode နဲ့ အောကျမှာ ထပျ ရေးပေးထားပါတယျ ။ *
ဟို တစ်နေ့က တင်ပေးလိုက်တဲ့ Quiz-4 အတွက်
ကျွန်တော်က စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တယ် ။ <<< ဆိုတာကို English လို ဘယ်လိုပြောမလဲ ?
A. I'm work inarestaurant.
B. I'm working inarestaurant.
C. I work inarestaurant.
D. My job is inarestaurant.
E. ABCD အားလုံးမမှန် ပါ ။ အဖြေမှန်မှာ ( ---နှစ်သက်ရာစာကြောင်း ထည့်ပါ ---- ) ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်က ညနေ ၆ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်တယ် ။ <<< ဆိုတာကို English လို ဘယ်လိုပြောမလဲ ?
A. I work to6pm.
B. I work untill6pm.
C. I finish work until6pm.
D. I work ( --- နှစ်သက်ရာစကားလုံး ထည့်ပါ --- )6pm.
ကျွန်တော် လောလောဆယ်မှာ သိပ် အရေးကြီးတဲ့ ပရောဂျက် တစ်ခုကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နေတယ် ။
A. I'm doingavery important project right now.
B. I'm workingavery important project right now.
C. I'm working foravery important project right now.
D. I'm tryingavery important project right now.
E. I'm working ( --- နှစ်သက်ရာစကားလုံး ထည့်ပါ --- )avery important project right now.
-someone who chooses to workalot,
so that they do not have time to do anything else <<<
( --- နှစ်သက်ရာစကားလုံး ထည့်ပါ --- )
and they really enjoy it
someone who is passionate about his job, who loves what he does and works very hard at it,
but who also has fun
Q-5 မှာ ဖြေဖို့သင့်တော်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတဲ့ စကားလုံးက
အခု နောက်ဆုံးထွက် English Dictionary အတော်များများမှာတောင် မပါသေးပါဘူး ။
2005 ခုနှစ်မှာ ဟောပြောသူ တစ်ယောက်က တီထွင်သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
စဉ်းစား မရလည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ။
#ActiveEnglish သင်တန်းသား/သူ တစ်ချို့ကတော့ မှတ်မိနေနိုင်မလားပဲ ။
ကျွန်တော်က စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တယ် ။
စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အကြောင်းကို သာမန် ပြောချင်ရင်
Present Tense ( work ) ပဲ သုံးရပါမယ် ။
လက်ရှိ အခိုက်အတန့် ၊ ယာယီအားဖြင့် လုပ်နေကြောင်းကို သိသာ ထင်ရှားအောင် ပြောချင်ရင်တော့ Present Continuous Tense ( Vbe + working ) သုံးရပါမယ် ။
ကျွန်တော်က ညနေ ၆ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်တယ် ။
E. ABCD အားလုံးမမှန် ပါ ။ အဖြေမှန်မှာ ( I work until6pm. ) ဖြစ်ပါတယ် ။
until ရဲ့ စာလုံးပေါင်း အမှန်က "L"တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ "L" ၂ လုံး ပေါင်းလိုက်ရင် မှားပါတယ် ။
Preposition တစ်ခု ဖြစ်ပြီး " အထိ ၊ တိုင်အောင် " စတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ် ။
ကျွန်တော် လောလောဆယ်မှာ သိပ် အရေးကြီးတဲ့ ပရောဂျက် တစ်ခုကို
အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နေတယ် ။
E. I'm working ( --- on --- )avery important project right now.
work on ဆိုတာ Phrasal Verb တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်စုံ တစ်ရာကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်တယ် လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ် ။
Workaholic ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီနေရာမှာ အတော်လေး သင့်တော်ပါတယ် ။
Alcoholic ဆိုရင် အရက်စွဲနေသူ ကို ပြောတာပါ ။Workaholic ဆိုတော့ အလုပ် စွဲနေသူ / အလုပ် အလွန်အကျွံ လုပ်လွန်းသူ ပေါ့ဗျာ ။
Dictionary အတော် များများမှာ ပါ ပါတယ် ။ :)
ဒီနေရာမှာ အတော်လေး သင့်တော်တဲ့ စကားလုံးကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က TED Talk မှာ
Richard St.John တီထွင်ပြောလိုက်တဲ့ Workafrolic ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ ။
Dictionary အတော် များများမှာ မပါသေးပေမယ့် လှပ ထိရောက်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးမို့လို့
TED Talk မှာ ဟောပြောစဉ်တုန်းကလည်း လက်ခုပ်သံတွေ ရရှိခဲ့ပြီး
- အလုပ် ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ကိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းကြရာမှာ ဖွင့်ဆို ကိုးကားချက်တွေ လုပ်နေကြတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
frolic ဆိုတာ တစ်ခုခုကို ပျော်ရွှင်စွာ ၊ စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွစွာ ၊ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ Verb တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီစကားလုံးကို Workaholic မှာ ပါတဲ့ Worka နဲ့ ပေါင်းစပ် တီထွင်အသုံးပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ " Level အဆင့်ဆင့် English Quiz -4" ရဲ့
English ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ အသိပညာ တစ်ခုခု ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ။
နောင်လည်း ဝင်ရောက် ဖြေဆို လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ။
Active English Page ကို Like လုပ်ပြီး
- Mobile Application သွင်းထားရင် ( http://www.mediafire.com/download/dwjob6dp65ara4c/english_learning_for_myanmar.apk )
ကျွန်တော် တင်သမျှ Post တွေကို မလွတ်တမ်း ဖတ်နိုင်မှာပါ ။
Level အဆငျ့ဆငျ့ English Quiz (4)
ဟို တဈနကေ့ တငျပေးလိုကျတဲ့ Quiz-4 အတှကျ
ကြှနျတျောက စားသောကျဆိုငျမှာ အလုပျလုပျတယျ ။ <<< ဆိုတာကို English လို ဘယျလိုပွောမလဲ ?
E. ABCD အားလုံးမမှနျ ပါ ။ အဖွမှေနျမှာ ( ---နှဈသကျရာစာကွောငျး ထညျ့ပါ ---- ) ဖွဈပါတယျ ။
ကြှနျတျောက ညနေ ၆ နာရီ အထိ အလုပျလုပျတယျ ။ <<< ဆိုတာကို English လို ဘယျလိုပွောမလဲ ?
D. I work ( --- နှဈသကျရာစကားလုံး ထညျ့ပါ --- )6pm.
ကြှနျတျော လောလောဆယျမှာ သိပျ အရေးကွီးတဲ့ ပရောဂကျြ တဈခုကို အငျတိုကျအားတိုကျ လုပျနတေယျ ။
E. I'm working ( --- နှဈသကျရာစကားလုံး ထညျ့ပါ --- )avery important project right now.
( --- နှဈသကျရာစကားလုံး ထညျ့ပါ --- )
someone who is passionate about his job,
who loves what he does and works very hard at it,
Q-5 မှာ ဖွဖေို့သငျ့တျောတယျလို့ ကြှနျတျော ယူဆတဲ့ စကားလုံးက
အခု နောကျဆုံးထှကျ English Dictionary အတျောမြားမြားမှာတောငျ မပါသေးပါဘူး ။
2005 ခုနှဈမှာ ဟောပွောသူ တဈယောကျက တီထှငျသုံးလိုကျတဲ့ စကားလုံး ဖွဈပါတယျ ။
စဉျးစား မရလညျး စိတျမညဈပါနဲ့ ။
#ActiveEnglish သငျတနျးသား/သူ တဈခြို့ကတော့ မှတျမိနနေိုငျမလားပဲ ။
ကြှနျတျောက စားသောကျဆိုငျမှာ အလုပျလုပျတယျ ။
- စားသောကျဆိုငျမှာ အလုပျလုပျတဲ့ အကွောငျးကို သာမနျ ပွောခငျြရငျ
Present Tense ( work ) ပဲ သုံးရပါမယျ ။
- လကျရှိ အခိုကျအတနျ့ ၊ ယာယီအားဖွငျ့ လုပျနကွေောငျးကို သိသာ ထငျရှားအောငျ ပွောခငျြရငျတော့ Present Continuous Tense ( Vbe + working ) သုံးရပါမယျ ။
ကြှနျတျောက ညနေ ၆ နာရီ အထိ အလုပျလုပျတယျ ။
E. ABCD အားလုံးမမှနျ ပါ ။ အဖွမှေနျမှာ ( I work until6pm. ) ဖွဈပါတယျ ။
until ရဲ့ စာလုံးပေါငျး အမှနျက "L"တဈလုံးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ "L" ၂ လုံး ပေါငျးလိုကျရငျ မှားပါတယျ ။
Preposition တဈခု ဖွဈပွီး " အထိ ၊ တိုငျအောငျ " စတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ ။
ကြှနျတျော လောလောဆယျမှာ သိပျ အရေးကွီးတဲ့ ပရောဂကျြ တဈခုကို
အငျတိုကျအားတိုကျ လုပျနတေယျ ။
work on ဆိုတာ Phrasal Verb တဈခု ဖွဈပါတယျ ။
တဈစုံ တဈရာကို ပွီးမွောကျအောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားပမျးစား လုပျတယျ လို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ ။
Workaholic ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီနရောမှာ အတျောလေး သငျ့တျောပါတယျ ။
Alcoholic ဆိုရငျ အရကျစှဲနသေူ ကို ပွောတာပါ ။
Workaholic ဆိုတော့ အလုပျ စှဲနသေူ / အလုပျ အလှနျအကြှံ လုပျလှနျးသူ ပေါ့ဗြာ ။
Dictionary အတျော မြားမြားမှာ ပါ ပါတယျ ။ :)
ဒီနရောမှာ အတျောလေး သငျ့တျောတဲ့ စကားလုံးကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှဈက TED Talk မှာ
Richard St.John တီထှငျပွောလိုကျတဲ့ Workafrolic ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ ။
Dictionary အတျော မြားမြားမှာ မပါသေးပမေယျ့ လှပ ထိရောကျတဲ့ စကားလုံး တဈလုံးမို့လို့
TED Talk မှာ ဟောပွောစဉျတုနျးကလညျး လကျခုပျသံတှေ ရရှိခဲ့ပွီး
- အလုပျ ကို ခဈြခငျနှဈသကျစှာ တကျတကျကွှကွှလုပျကိုငျဖို့ တိုကျတှနျးကွရာမှာ ဖှငျ့ဆို ကိုးကားခကျြတှေ လုပျနကွေတဲ့ စကားလုံး တဈလုံး ဖွဈပါတယျ ။
frolic ဆိုတာ တဈခုခုကို ပြျောရှငျစှာ ၊ စိတျလှုပျရှား တကျကွှစှာ ၊ အငျတိုကျအားတိုကျ လုပျတယျလို့ အဓိပ်ပာယျ ရတဲ့ Verb တဈလုံး ဖွဈပါတယျ ။
ဒီစကားလုံးကို Workaholic မှာ ပါတဲ့ Worka နဲ့ ပေါငျးစပျ တီထှငျအသုံးပွုလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ ။
အခုလောကျဆိုရငျတော့ " Level အဆငျ့ဆငျ့ English Quiz -4" ရဲ့
English ဘာသာစကား ဆိုငျရာ အသိပညာ တဈခုခု ရလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျဗြာ ။
နောငျလညျး ဝငျရောကျ ဖွဆေို လလေ့ာဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ ။
Active English Page ကို Like လုပျပွီး
- Mobile Application သှငျးထားရငျ ( http://www.mediafire.com/download/dwjob6dp65ara4c/english_learning_for_myanmar.apk )
ကြှနျတျော တငျသမြှ Post တှကေို မလှတျတမျး ဖတျနိုငျမှာပါ ။